Galmudug oo DF-ka, ka dalbatay in ay ku soo biirto xal u raadinta dagaalkii Xeraale – Kalfadhi
Galmudug oo DF-ka, ka dalbatay in ay ku soo biirto xal u raadinta dagaalkii Xeraale
Madaxweyne ku xigeenka Maamulka Galmudug Maxamed Xaashi Carabeey oo wareysi gaar ah siiyay Kalfadhi ayaa walaac ka muujiyay dagaaladii dhowaan ka dhacay degaanka Xeraale ee Gobalka Galgaduud, kuwaas oo aan wali xal laga gaarin.
Maxamed Xaashi Carabeey ayaa Kalfadhi u sheegay in wali ay is horfadhiyaan dhinacyadii dagaalamay islamarkaana xilli walba uu dhici karo dagaal waxa uuna ku taliyay in laga wada qayb qaato dhamaynta colaadda soo laa-labatay ee degaanka Xeraale.
“DF-ka Soomaaliya waxaan uga baahanahay in ay door wayn ku yeelato dhamaynta dagaalkii Xeraale, oo sababay dhimasho iyo dhaawac badan mana ahan in uu dib u soo laabto”, ayuu yiri Madaxweyne ku xigeenka Galmudug oo wareysi siiyay Kalfadhi
Maxamed Xaashi Carabeey ayaa sheegay in Dowladda Soomaaliya aysan gelin waqtigii iyo dadaalkii loo baahnaa in lagu bixiyo colaadda degaanka Xeraale oo soo bilaabatay bishii June ee sanadkii 2017, ilaa hadana ka taagan degaankaasi.
“DFS ma gelin waqtigii loo baahnaa xaaladda Xeraale, hadana waxaa ii muuqata in aysan wali u soo dhaqaaqin, waxaan dalbanayaa in ay ka qayb qaadato xal u raadinta beelaha Xeraale”, ayuu yiri Maxamed Xaashi Carabeey.
“Annaga waxaan gelinay waqti badan, hadana waan ku jirnaa sidii aan ku xalin lahayn, balse waa arin anaga wayn”, ayuu hadalkiisa sii raaciyay Madaxweyne ku xigeenka Maamulka Galmudug Maxamed Xaashi Carabey oo wareysi siiyay Kalfadhi.
Wararkii ugu dambeeyay ee ka imaanaya degaanka Xeraale ayaa soo sheegaya in saacadihii la soo dhaafay ay xaaladu dagantahay balse wali ay is horfadhiyaan dhinacyadii dagaalamay.
Xildhibaan Idiris “Aqalka Sare Waxa uu gabay Shaqadii loo Idmaday”
DF-ka oo sheegtay in aysan waqtigeeda dib uga dhacayn doorashada Galmudug